बीपीएलमा आज सिक्सर्सले तेस्रो खेल खेल्दै,सन्दीपले कति विकेट लेलान् ? – YesKathmandu.com
बीपीएलमा आज सिक्सर्सले तेस्रो खेल खेल्दै,सन्दीपले कति विकेट लेलान् ?
काठमाण्डौ । सिलेट सिक्सर्सले बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) क्रिकेट लिगको तेस्रो खेल आज खेल्दैछ । ढाकामा हुने खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको टिम सिक्सर्सले ढाका डाइनामिकसंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
नेपाली समय अनुसार खेल बेलुका ६ बजे सुरु हुनेछ । ढाकाविरुद्ध मैदान उत्रदा सन्दीपको टिम सिक्सर्स लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा कोमीला भिक्टोरियन्ससंग पराजित सन्दीपको टिम सिक्सर्सले दोस्रो खेलमा चितागोङ भीकिङसलाई हराएको थियो । सन्दीपको टिम सिक्सर्स २ अंक जोडेर पाँचौ स्थानमा छ । ढाका ६ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ । यस्तै बीपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका सन्दीप तेस्रो खेलमा समेत सिक्सर्सको टिममा पर्ने सम्भावना रहेको छ । डेब्यु खेलमा सन्दीपले ४ ओभर बलिङ गर्दै १६ रन खर्चिएर २ विकेट लिन सफल भएका थिए । दोस्रो खेलमा भने सन्दीप विकेट बिहिन बने । सन्दीपले ४ ओभर बलिङ गर्दै २१ रन खर्चिए ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै राजपाद्वारा संसद् अवरुद्ध
संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै, आजै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य
आजदेखि एसईई परीक्षा (फाेटाे फिचर)